မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတာဘာလဲ- ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 14/06/2022 10:00 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ကုန်းမြေပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြစ်များမှလာသော ရေချိုများကို ပင်လယ်မှထွက်သော ဆားငန်ရေများနှင့် ရောနှောပေးသော ဂေဟစနစ် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤဂေဟစနစ်များကို မြစ်ဝများဟု ခေါ်သည်။ သို့သော် လူတော်တော်များများ မသိကြပါ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတာ ဘာလဲ။. ၎င်းသည် မြစ်များနှင့် ပင်လယ်တို့မှ ရေများကို ရောနှောရန် တာဝန်ရှိသော ရောနှောဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရေကောင်များကို ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းကာ ပင်လယ်ပြင်တွင်ရှိသော ကုန်းမြေဧရိယာများဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ locker room ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်နဲ့ အရေးပါပုံကို ပြောပြပါမယ်။
1 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
4 မြစ်ဝတွင် သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ
မြစ်ဝများသည် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များစွာအတွက် ဂေဟစနစ်များနှင့် ခိုလှုံရာများဖြစ်သည်။ ဤသက်ရှိများသည် ရှင်သန်ရန်၊ ကျွေးမွေးရန်နှင့် မျိုးပွားရန်အတွက် ဤဂေဟစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အမျိုးအစားများကို ရေစီးဆင်းမှု ဧရိယာအလိုက် ခွဲခြားထားသည်။ ဤရေသည် သမုဒ္ဒရာများ၊ ပင်လယ်အော်များ၊ ချောက်များ၊ ရေကန်များ၊ ဥယျာဉ်ခြံများ သို့မဟုတ် တူးမြောင်းများတွင် အဆုံးသတ်သည်။ တူးမြောင်းများမှ ရေချိုများကို ပင်လယ်မှ ဆားငန်ရေများနှင့် ရောနှောထားသည်။ ကွဲပြားသော ဆားငန်ဓာတ်ရှိသော ရေ၏ ပဋိပက္ခသည် မြင့်မားသော စိမ်းလန်းမှု ဖြစ်စေသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် မြစ်ဝကို တစ်ခါတစ်ရံ အပန်းဖြေရန်၊ ခရီးသွားများနှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသည့်နေရာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဖြစ်ထွန်းမှုအရှိဆုံးဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သြဂဲနစ်ဒြပ်စင် အများစုသည် မြစ်များမှ သယ်ဆောင်လာသော မြေအာဟာရများမှ ထွက်ရှိပြီး တစ်ဖက်တွင်မူ သမုဒ္ဒရာများ သယ်ဆောင်လာသော အာဟာရများမှ ထွက်ရှိပါသည်။
တစ်ပိုင်းပိတ်စနစ်၊ အိမ်နီးချင်း ဂေဟစနစ်များစွာမှ ပစ္စည်းများ ဖလှယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။. ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်တိမ်သောနေရာများဖြစ်သောကြောင့် အလင်းရောင်သည် ရေကို အလွယ်တကူ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် မြစ်ဝတွင် အလင်းဓာတ်ပြုမှုနှုန်းမှာ အလွန်မြင့်မားသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ပင်မထုတ်လုပ်မှုကို ကောင်းမွန်စေသည်။ လူသားစားသုံးမှုမျိုးစိတ်အများအပြားဖြစ်သည့် crustaceans၊ molluscs နှင့် အချို့သောငါးများကဲ့သို့ မြစ်ဝများတွင် နေထိုင်ကြသည်ကိုလည်း သတိရသင့်သည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်များ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတစ်ခုမှာ ရေအမြောက်အမြားကို ထိန်းထားရန်နှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မုန်တိုင်းကာလအတွင်း ကမ်းရိုးတန်းပျက်စီးမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် လူဦးရေစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော အခြေအနေများတွင် မြစ်ရေစီးကြောင်းသည် ရေပိုမိုသယ်ဆောင်လာကာ အနည်အနှစ်များနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများကို အစားထိုးရန် ဖြစ်စေသည်။ ဤအားကောင်းသော ရေစီးကြောင်းကြောင့် ရေသည် သန့်ရှင်းနေပါသည်။
ဒီရေတက်ချိန်မှာ ပင်လယ်ရေတွေက ပင်လယ်ရေကနေ စီးဆင်းလာတာကြောင့် မြစ်ဝှေးတွေဟာ ရေချိုတွေနဲ့ ရောနှောပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ထို့နောက် ရေနည်းချိန်တွင် ရေချိုသည် သမုဒ္ဒရာထဲသို့ စီးကျလာသည်။ ယင်းကြောင့် ဧရိယာအတွင်း ကြီးမားသော စိမ့်ကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
လတ်ဆတ်သောရေနှင့် ဆားငန်ရေများ ရောနှော၍ ဖွဲ့စည်းထားသော မြစ်ဝှေးများသည် ကွဲပြားခြားနားသော ဂေဟစနစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ယင်းဒေသများတွင် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ အတူတကွ ပေါင်းစည်းကြသည်။ မြစ်ဝများ သည် သမုဒ္ဒရာ အနီးရှိ အခြား ရေ များ နှင့် တွေ့ဆုံသည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဇုန်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် ဂေဟစနစ်ဖြင့် ပူနွေးသောရေများဖြစ်သည်။
ရွ့များ မကြာခဏ ပေါက်သော်လည်း၊ အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ ဒီရေတောတွေလည်း တွေ့နိုင်တယ်၊ နစ်မြုပ်သောနေရာများ ပိုများသည်။ ၎င်းတို့တွင် ကွဲပြားသော ဂေဟစနစ်ရှိသည်။ ရွှံ့ညွန် သို့မဟုတ် ကျောက်ဆောင်ဧရိယာများပါရှိသော ပိုနက်သောမြစ်ဝများကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်များသည် ကွဲပြားကြပြီး ဤနေရာများသည် သစ်တောများ သို့မဟုတ် မြက်ခင်းပြင်များနှင့် အရွယ်အစား တူညီသောကြောင့် ကမ္ဘာမြေအတွက် များစွာသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤနေရာများတွင် အလွန်အရေးကြီးသော တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ ကျက်စားရာနေရာများ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရေစစ်အဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသအများအပြား၏ စီးပွားရေးသည် ငါးများ၊ ခရုခွံများ၊ သို့မဟုတ် ရေညှိများ ပေါများသောကြောင့် မြစ်ဝများအနီးတွင် ဗဟိုပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ခရီးသွားများအတွက် ရေပန်းစားသော နေရာများဖြစ်ပြီး ငှက်ကြည့်ခြင်းမှာ အလွန်အဖြစ်များပြီး ၎င်းတို့သည် သိပ္ပံပညာနှင့် ပညာရေးအတွက် ရည်စူးသော နေရာများဖြစ်သည်။
အချို့သော ပင်မလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ မြစ်ဝှေး အမျိုးအစားများ ကွဲပြားသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အမျိုးအစားတစ်ခုစီကို ဒီရေတက်ချိန်တွင် မြစ်အတွင်းရှိ ရေပမာဏနှင့် ဒီရေ၏ ပမာဏအကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤနေရာမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြစ်ဝှေး အမျိုးအစားများစွာကို တွေ့နိုင်သည်-
Salt Wedges Estuary: ပင်လယ်ထဲမှာထက် မြစ်တစ်စင်းမှာ ရေပိုများလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မြစ်ရေ၏ ထိပ်နှင့် အောက်ခြေရှိ ဒီရေအလွှာကြား ပါးလွှာသော အသွင်ကူးပြောင်းမှုအလွှာနှင့် ရောစပ်ထားသည်။
မျဉ်းသားထားသော မြစ်ဝှေးများ- ဤမြစ်ဝကျွန်းပေါ် အမျိုးအစားများတွင် ဝင်လာသော ရေချိုပမာဏသည် ပင်လယ်ရေထက် ပိုများသော်လည်း မများပေ။ ဤအခြေအနေများသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ လှိုင်းလုံးများသယ်ဆောင်လာသောကြောင့် အမျိုးမျိုးသောရေ၏ကိုယ်ထည်များကြားတွင် ရေများရောနှောသွားစေသည်။ ရေနှစ်ခု ရောနှောသွားသောအခါတွင် အလွှာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မျဉ်းသားထားသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မြစ်ရေ ပမာဏသည် ပင်လယ်ရေထက် နည်းပါးသော မြစ်ကမ်းပါး ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနေရာတွင် ရေ၏ ဆားငန်ဓာတ်သည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အထက်အလွှာတွင် ဆားငန်ဓာတ်သည် အောက်လွှာကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေစီးကြောင်းသည် အလွန်လျင်မြန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒေါင်လိုက်ရောစပ်ထားသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ဤလော့ခ်ခန်းအမျိုးအစားတွင်၊ ဒီရေပမာဏနှင့်ဆက်စပ်၍ ရေချိုပမာဏသည် လက်တွေ့တွင် အရေးမပါပါ။ ဤနေရာတွင် ယူနီဖောင်းဆားငန်ဓာတ်ဖြင့် လော့ကာဒီရေ၏ ယေဘုယျလွှမ်းမိုးမှုမှာ လွှမ်းမိုးထားသည်။ ရေလဲလှယ်ရန် ခဲယဉ်းသောကြောင့် ဆားငန်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ ရေကော်လံတွင်လည်း ဒေါင်လိုက်အလွှာများ မရှိပါ။
ပြောင်းပြန်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်: မြစ်တစ်စင်းမှ မထောက်ပံ့သော မြစ်အမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ရေငွေ့ပျံနှုန်းမြင့်မားသော နေရာများတွင် ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အငွေ့ပျံခြင်းသည် ဆားငန်ဓာတ်ကို ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ထို့အပြင် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ရေပိုငန်သောကြောင့် သိပ်သည်းဆတိုးလာခြင်းကြောင့် နစ်မြုပ်သွားရသည်။
ကြားဖြတ်မြစ်ဝများ- ၎င်းတို့သည် ထိုအချိန်တွင် မိုးရေချိန်ပေါ်မူတည်၍ အမျိုးအစားတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာလေးမှာ မိုးရေချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ပိုမြင့်ရင် မြစ်ကြမ်းပြင်က ရေပိုသယ်လာမယ်။
မြစ်ဝတွင် သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ
မြစ်ဝကို သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အပင်အများစုသည် ရေနေသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ကျူပင်များ၊ ဒီရေတောများ ပါဝင်သော ဂေဟစနစ်များကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အများအပြားတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေငန်ဒဏ်ကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော သစ်ပင်မျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။ စိုစွတ်သောမြေများတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိကြပြီး ဒီရေတောမျိုးစိတ် ၇၀ ခန့်ရှိသည်။ အဖြူ၊ အနက်၊ အနီရောင်နှင့် မီးခိုးရောင် ဒီရေတောများသည် ထင်ရှားသည်။
ဒီရေတောတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အသီးအရွက်တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့ ပင်လယ်မြက်တွေပါ။ ရေညှိလွင်ပြင်များရှိ ဧရိယာများနှင့် ဖောပလပ်စတန်အများအပြားကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံလည်း ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်မှ အထူးခြားဆုံးမှာ တိရိစ္ဆာန်ရေပန်းပင်များဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်သည် ရေကို အလွန်ကောင်းစွာ စိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။. အဆိုပါ တိရစ္ဆာန် မျောက်များသည် အထူးသဖြင့် ငါးမျိုးရိုး၊ ဆာဒင်း နှင့် ကျောက်ချွဲငါး များကို ကျက်စားသည်။ ခရုများ၊ crustaceans၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ ငှက်များနှင့် တွားသွားသတ္တဝါအချို့လည်း အများအပြားရှိသည်။
မြစ်ဝများသည် ၎င်းတို့တည်ရှိရာ လတ္တီတွဒ်ပေါ်မူတည်၍ အပူပိုင်း၊ သမပိုင်း သို့မဟုတ် အေးသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်ရာသီဥတုတွင်မဆို မြစ်ဖျားခံနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ ကမ်းရိုးတန်း စရိုက်ကြောင့် ၎င်း၏ ရာသီဥတုသည် သမုဒ္ဒရာ ထုထည်အပေါ် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဒါကြောင့် အေးတဲ့ဒေသတွေမှာတောင် ရာသီဥတုက အတွင်းပိုင်းလောက် မပြင်းထန်ပါဘူး။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် မြစ်ကမ်းပါးဆိုသည်မှာ မည်သည်နှင့် ၎င်း၏လက္ခဏာရပ်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတာ ဘာလဲ။